Samsung Galaxy S10 ma ọ bụ Samsug Galaxy S9: nke nlereanya ịzụta | Gam akporosis
Nchere ahụ abụrụla mgbe ebighi ebi, mana n'ikpeazụ Samsung Galaxy S10 bụ eziokwu. Ọ bụ eziokwu na, site n'ọtụtụ asịrị anyị matara imirikiti data, onye nrụpụta Korea debere aghụghọ ụfọdụ n'aka ya, dịka ngosi nke Samsung Galaxy Fold, Samsung ekwentị foldable ihuenyo ekwentị. Ugbu a ire niile azụọla, ọ dị ya mma zụta Samsung Galaxy s10, ma ọ bụ jiri eziokwu ahụ bụ na Samsung Galaxy S9 nwere ike ịchọta na ọnụahịa dị ala karị?
Anyị na-ekwu maka ọdịiche dị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ euro 400 n'etiti ụdị abụọ ahụ. Ya mere, ihe mobile ịzụta, na Samsung Galaxy S10 ma ọ bụ onye bu ya ụzọ? Ka anyị hụ ihe mgbanwe ọhụụ ọhụrụ nke ụlọ ọrụ Galaxy S nke na-eweta Seoul na-eweta iji hụ ka o si dịwanye mma na onye bu ya ụzọ.
A akara mkpisiaka agụba n'ime ihuenyo na a nnọọ ike igwefoto
Obi abụọ adịghị ya na otu n'ime akwụkwọ akụkọ kachasị ọhụrụ nke ihe nlereanya a na-abịa n'eziokwu na Samsung Galaxy S10 nwere akara mkpisiaka agụkọtara na ihuenyo. Anyị na-ekwu okwu banyere ihe mmetụta ultrasonic nke Qualcomm rụpụtara na nke ahụ na-enye arụmọrụ dị ike. Na eziokwu bụ na ọrụ ya, na eziokwu ahụ bụ na teknụzụ ya dị nchebe karị, bụ otu n'ime ihe dị iche iche dị n'etiti Samsung Galaxy S10 na Samsung Galaxy S9.
N'aka nke ọzọ anyị nwere ngalaba foto: nke atọ Samsung Galaxy S10 igwefoto nkwa, na ọtụtụ. Iji malite, o nwere lens telephoto, nke sụgharịrị ka ọ bụrụ mbugharị n’agbata 0.5 na 2X n’enweghị oke mbibi, nke na-eme ka foto dị anya dị ike karịa. A ghaghị ịgbakwunye nke a ihe mmetụta nke abụọ obosara, nke na-enye ohere ịse foto na ogo 172, ezigbo maka ịme ọtụtụ gburugburu ebe pụrụ iche na-ekpuchi isi ihe ga-ekwe omume.
Samsung Galaxy S10 enweghị usoro NPU abụọ nke, site na usoro ọgụgụ isi ya, na-enweta ọtụtụ nsonaazụ zuru oke: ọ nwere ọtụtụ ụzọ mgbe a bịara n'ịse foto, na mgbakwunye iji kwe ka ị nweta nsonaazụ ka mma ebe ọ bụ AI na-enyere gị aka karịa mgbe ị na-ahọrọ nguzo ọcha, ọkwa ISO na akụkụ ndị ọzọ na-eme ka foto dị mma bụrụ ezigbo ọrụ nka.
Ugbu a, na usoro nke imewe, ọ bụ ezie na Galaxy S10 nwere akara ngosi ka mma, anyị na-eche ihu igwe yiri nke abụọ: otu ahụ nke aluminom na iko nwere mmụọ, iguzogide uzuzu na mmiri site na asambodo IP68 ... Samsung Galaxy S10 nwere Infinity O ihuenyo nke na-enweta nha ihu igwe nke 91.2 pasent, nke na-eme ka ọ maa mma n'ezie, na-ekwughi eziokwu ahụ bụ na igwefoto ya nwere oghere dị iche iche dị iche iche ma e jiri ya tụnyere onye na-asọmpi ya.
N'ọnọdụ ọ bụla, ọ bụrụ na anyị atụlee mgbanwe ndị bụ isi, ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na ọkọlọtọ ọhụrụ ahụ nwere ụfọdụ ihe dị iche iche, ọkachasị ngalaba foto na eziokwu ahụ bụ na Samsung Galaxy S10 bịarutere na onye na-agụ akara mkpisiaka tinye na ihuenyo ahụ, ọ nwere ike ọ gaghị kwesiri mgbanwe.
Echiche anyị na nke a bụ ihe ndị a: ọ bụrụ na ị nwere mkpali ịnwe ekwentị kachasị ike n'ahịa, yana atụmatụ nke oge a na ngalaba foto zuru oke, egbula oge, Samsung Galaxy S10 bụ nhọrọ dị mma ịtụle. Ma, ọ bụrụ na anyị eburu n'uche na, n'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na Samsung Galaxy s9 emeela agadi, ọ ka nwere ngalaba ọrụ aka siri ike n'ezie ịmegharị egwuregwu na ngwa ọ bụla na-enweghị nsogbu, belụsọ na ịchọrọ ịnụ ụtọ ụdị ọhụụ ahụ, ọ kachasị mma oge maka CBuyzụta Samsung Galaxy S9 dị ọnụ ala karịa karịa mgbe ọ bụla. More ma ọ bụrụ na anyị eburu n'uche na ugbu a ị nwere ike ịzụta ya na ọnụahịa pụrụ iche ebe ọ bụ na onye nrụpụta Seoul agbadaala ọnụahịa ya na Amazon na-eji ohere nke mwepụta nke onye nọchiri ya.
Zụrụ Samsung Galaxy S9 maka naanị 575 euro
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Esemokwu dị n’etiti Samsung Galaxy S10 na Samsung Galaxy S9, ọ kwesịrị mgbanwe ahụ?
Nkọwapụtafuru banyere Galaxy S10: ezigbo ọkwa ọkwa LED, eserese Bixby na ndị ọzọ
Samsung rerewo smartphones nke ijeri Galaxy 2 n'ime ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ iri